လျှို့ဝှက် ကင်မရာကာကွယ်ရေး ~ Myanmar Express
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထားမထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အ၀တ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အ၀တ်အစားလဲခန်း (အ၀တ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။1. အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုမ၀င်မီ မိမိဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လုပ်လို့ရမရ စစ်ဆေးထားပါ။2. အ၀တ်လဲခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။3. ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင် အဲဒီအ၀တ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera ရှိနေဖို့များသွားပါပြီ။ ဖုန်းခေါ်မရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ hidden camera ရဲ့ ဖိုင်ဘာကေဘယ်က mobile phone လိုင်းကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလို့ပါပဲ။နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) နဲ့ ရိုးရိုးကြေးမုံမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဟိုတယ်တွေရဲ့ သန့်စင်ခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေက အ၀တ်အစားလဲခန်းတွေ၊ ဟိုတယ်အိပ်ခန်းတွေ မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မှန်တွေဟာ တကယ့်ကြေးမုံပြင်စစ်စစ်တွေလား၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) တွေလား ဆိုတာ သင် သံသယ၀င်ဖူးပါသလား? Two way mirror ဆိုတာကတော့ သင့်ဘက်ကကြည့်ရင် ကြေးမုံပြင်အနေနဲ့ သင့်ပုံရိပ်ကို သင်ပြန်မြင်နေရပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်က ကြည့်ရင် သင်လုပ်သမျှကို တစ်ဘက်လူက အကုန်မြင်နေရမှာပါ။ ဟောလိဝုဒ် စုံထောက်ကားတွေမှာ တရားခံကို စစ်မေးတဲ့အခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့မှန်မျိုးပေါ့။ အပေါ်ယံကြည့်ရုံနဲ့တော့ ကြေးမုံအစစ်လား၊ နှစ်ဘက်မြင်မှန်လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဘက်မြင်မှန်တွေကို သိနိုင်တဲ့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသော စမ်းသပ်နည်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။1. သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းကို မှန်ရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ထိထားလိုက်ပါ။2. သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်က လက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ သင့်လက်ချောင်းလက်သည်းခွံကြားမှာ အနည်းငယ်ကွာဟနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါဟာ သာမန် ကြေးမုံပြင်ပါ။3. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းလက်သည်းခွံနဲ့ မှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ လက်ချောင်းလက်သည်းခွံ နှစ်ခုဟာ တိုက်ရိုက်ထိစပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်၊ ကြားထဲမှာ အကွာအဝေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာ နှစ်ဘက်မြင်မှန် (two way mirror) ပါပဲ။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သာမန်ကြေးမုံပြင်တွေမှာ မှန်ရဲ့ တစ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကို ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားပြီး မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာတော့ ပြဒါးသုတ်လိမ်းထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်လက်ချောင်းထိပ်နဲ့ မှန်ထဲကပုံရိပ်ရဲ့ လက်ချောင်းထိပ်ကြားမှာ မှန်တစ်ချပ်စာ ကွာခြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်မြင်မှန်မှာတော့ ပြဒါးကို မှန်ကြည့်သူဘက်က မျက်နှာပြင်မှာ သုတ်လိမ်းထားတာမို့ သင့်လက်ချောင်းနဲ့ မှန်ထဲကလက်ချောင်းကြားမှာ ကွာဟမှုမရှိတော့တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မှန်ရှေ့ရောက်ရင် မှန်မျက်နှာပြင်ကို လက်သည်းထိပ်လေးနဲ့ ထိကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဒီစာလေးကို သင့်ရဲ့ "သူငယ်ချင်းတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ" တွေဆီကို forward လုပ်ပေးပါ။ ဒီစာလေးကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့် "အမျိုးကောင်းသမီးများစွာရဲ့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာ" ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Express
Posted in: နည်းပညာ,သတင်း
ဒီလိုအကြံပေးတာကောင်းတယ်တယ်၊ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်
12 July 2012 22:38
13 July 2012 10:11
good! kg par tel thi lite ya lodar myo lay tway myar myar tin naing yin po kg telho ko poke khat de ko poke khat htet sar yin.ati pyaw ter par some old news tway ka really funny par, lone wa leladate pel ma shi par bu, ye sa yar ta kuanay nae pel read lo ya tel, sin sar tet thu tine thi par tel
13 July 2012 11:22
13 July 2012 11:26
Anonymous says;13 July 2012 11:28Good တယ်ဗျာ.
13 July 2012 20:55
Fiber cable can't disturb microwave signal (mobile phone line).
17 July 2012 11:33
17 July 2012 23:45
သိပ်ကောင်းတာပဲ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အတွက်ကောင်းသွားတာပေါ့လုပ်စားမယ့်ကောင်တွေ လုပ်စားမရတော့ဘူး
26 July 2012 23:01
good for all myanmar woman
28 July 2012 04:12
31 July 2012 00:31
ဒီ လို အ ကြောင်း အ ရာ တွေ ကို သ တိ ပေး လို့ MG ကို အ မြဲတမ်း ကြည့် ဖြစ် နေ ကြ တာ ပါ။ MG မှာ သ တင်း အ စုံ ပါ ပါ တယ်။
2 August 2012 20:32
very great idea...u save all of myanmar ladies...
3 August 2012 19:41
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် နောက်လဲ ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပေးပါ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အပေါ်ကာကွယ်ပေးချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်
5 August 2012 12:15
13 August 2012 13:51
တော်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာပဲ ကျေးဇူးတင်တယ် kyaw kyaw
14 August 2012 20:12
ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။မြန်မာမိန်း က လေး တွေ အတွက်
7 October 2012 22:47
ဒီလိုဗဟုသုတတွေ များများတင်ပေးပါ ... ကျေးဇူး ..
11 October 2012 10:59
Good new n we take care,thank u .......Jame
19 March 2013 12:39
1 April 2013 12:29
bal lo ti lal
မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဒုက္ခသည်တွေကို သနားလှပါတယ်ဆိုတဲ့ U...
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်...
ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြေလျှော့ အပြီးတွင် ကလင်တန်မှ သမ္မတ...
ရန်ကုန်မြို့တော်ဘဏ်နှင့် ရိုးမဘဏ်၊ မြ၀တီဘဏ်တို့ အြ...
အာဆီယံမှ မြန်မာသို့ တင်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စည်း ၇၅၀၀ေ...
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်သူ များ...
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ မ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မ...
ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ မီဒီယာ အားကိုးဖြင့် အကြံပက်စက...
မြန်မာအပါအ၀င် အာရှ ငါးနိုင်ငံကို ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်...
အလယ်တန်းနှင့် မူလတန်း ကျောင်းအုပ်များ၏ လစာအား တိုး...
ဒေါ်နန်းဝါနု၏ အဆိုကို လွှတ်တော်က အတည်ပြု
ယဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြူဖြူကျော်သိန်း မထနိုင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဟီလာရီကလင်တန...
ဗဟိုဘဏ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းများကို အများပြည်သူ သိရ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့တွင်ြ...
မီးသတ်ရေသယ် ယာဉ်အစီးရေ ထပ်မံတိုးမြှင့် သွားမည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် မြေပြိုမှုများဖြစ်၊ သေဆုံးသူ ၉၄ ဦး...
မြန်မာ့စီးပွားရေး ညီလာခံအား ပြည်ပ၌ ကျင်းပ သွားမည်
တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ...
မွန်ပြည်နယ်၌ အခြေခံ ပညာကျောင်း ၃၅ ကျောင်း ထပ်မံတို...
ကေတီပယ်ရီ၏ဖက်ရှင်မှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သဖြင့် အာမခံကု...
ဒုသမ္မတ တင်မြှောက်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှ...
၀န်ကြီးများရုံး၊ တရားရုံးချုပ်၊ စုပေါင်းရုံးနှင့် ...
ရိုဟင်ဂျာများကို တာဝန်ယူရန် UNHCR အကြီးအကဲ ငြင်းပယ...
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် ဟီလာရီကလင်တန်တို့ ဒုတိ...
လွှတ်တော်သတင်းထောက်များ လွှတ်တော်တွင်းဝင်ရန် လက်ဗွေန...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လျှော့ချခြင...
ရန်ကုန်-တရုတ်( တိုင်ပေ) လေကြောင်းလိုင်း ပျံသန်းမည်...
မြန်မာနှင့် တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတို့ ဖနွမ်...
ခိုးဝင်လာ သည့် ရိုဟင်ဂျာ များကို လက်ခံရန် မည်သို့မ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုြ...
မြန်မာနိုင်ငံကို အလှူရှင်နိုင်ငံများ အကူအညီပိုပေးန...
မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတ...
လူမြင်ကွင်းတွင် ယောင်္ကျားချင်း လိင်ဆက်ဆံသူ HREIB ဒါ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေထုတ်ဝေသူများနှင့် ဖြန့်ချိသူများ...
အဘွားဖြစ်သူက ၈ လအရွယ်မြေးမလေး၏လက်များကိုခုတ်ဖြတ်ပစ...
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်ကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှ...
ပြည်တွင်းသို့ မြန်မာလုပ်သားများ လွှဲငွေ တစ်လပျမ်းမှ...
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ရ...
UNFPA မှ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးနှင့် လူဦးရေ ဖွံ့...
ရန်ကုန်မြို့နှင့်အပြိုင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေမူ၊လု...
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ၏ သမိုင်စုံ
ဦးရွှေမန်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနီးကပ် လူများမှ...
နယူးယောက် မှ ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန...
ရိုဟင်ဂျာ နှင့် မူဆလင် ကွဲပြားခြားနားပုံ....
မီးသတ် ဦးစီးဌာနမှ တဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လှူဒါန်...
ဗိုလ်မှူးဗထူး လမ်းမကြီး တိုးချဲ့မှု ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း...
နေပြည်တော်ရှိ ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်း တည်ဆောက်မှု ၇၅ ...
နိုင်ငံတကာ ဘဏ်များရဲ့ Credit ကဒ်များကို အသုံးပြု န...
ချင်းမိုင်ရှိ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို ထိုင်းသိမ်...
KIA တပ်ဖွဲ့ အောက်လမ်းနည်းသုံးနေပြီလား ????
ဦးမြင့်ဆွေ အား ဒုတိယ သမ္မတ ရာထူးအတွက် အဆိုတင်သွင်း...
ရခိုင်တွင် တက္ကသိုလ်များ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ ပြန်ဖွင်...
CDMA 800 MHz ဖုန်း အလုံးရေ ရှစ်သောင်း နီးပါး ချထား...
အိန္ဒိယမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ဘာကြောင့်ကွယ်ခဲ့ရသလဲ...
﻿ချောင်း အဆက်မပြတ် ဆိုးခြင်းကို လက်နှိပ် နည်းဖြင့်...
ဒုတိယ၀န်ကြီးများ အစားထိုး ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်
တစ်နှစ်တွင် ရှစ်လ လွှတ်တော်ခေါ်မည်
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်...
အိုင်တီပညာရပ် ကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲများတွင် ၀င်ရော...
Shopping ထွက်တက်တဲ့ မမ များ ညီမများ သတိထားရန်
လယ်တောသူ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး...
ပြည်ပရောက် ရခိုင်များသို့ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာ အမျ...
အမျိုးသားများ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ
အမေစုချစ်သော အစ္စလာန် ဘာသာဝင်များမှပျော်ဘွယ်မြို့တွ...
အစိုးရ ၀န်ထမ်း များအား တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းများ အရစ်က...
ကျွန်တော် BBC / VOA/ DVB သတင်းထောက်ပါလို့ ပြောလိုက...
ကေအိုင်အေ(ကချင်) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနား -ဆွမ...
ဝန်ကြီးဌာနများ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီး ဝန်ကြီးများ ပြေ...
မြန်မာအမျိုးသမီး သူရဲကောင်း တစ်ဦးအကြောင်း.....
တရုတ်မင်းသားကို ပြေးတွေ့ကြသော လူမင်း၊ ရဲတိုက်၊ ဝို...
သမ္မတဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့စီမံ...
U-22 တွင် သက်ကျော် ကစားသမားမရှိဟု အားကစားအဖွဲ့ချုပ...
တစ်နှစ်လျှင်တန်တစ်သန်း ထုတ်လုပ်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ...
ထိုင်းနိုင်ငံက တက်သစ်စ မင်းသမီးလေးတယောက်ပါ။ မီဒီယာတွေက သူနဲ့ပတ်သက်လို့မိန်းကလေး အစစ်မဟုတ်ဖူး၊ အချောက်လို့ ဝေဖန်ခံရတဲ့အချိန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်...
စင်္ကာပူတွင် မီးခိုးမြူများကြောင့် ကျန်းမာရေးသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင် မီးခိုးမြူများ ထူထပ်နေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်ကိုပင် အစိုးရက ထုတ်ပြန် ကြေညာထားကြောင်း သိရှိရသည်။